Docker 18.09 inowedzera kutenderera kwekutsigirwa, SSH kuendesa uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura vagadziri veDocker vakaburitsa vhezheni itsva yesoftware yavo kuuya izvi ku mhando 18.09 inomiririra kufambira mberi kwakakosha kweinjini inotungamira yemudziyo wepasi rose.
Neichi chitsva kuburitswa kweDocker vagadziri vaunza zvivakwa zvitsva uye maficha anovandudza mashandiro emidziyo uye mhanyisa kugamuchirwa kwemhando dzese dzemushandisi weDocker, angave anovandudza, weIT admin, anoshanda pakutanga, kana kambani hombe yakasimbiswa.
1 Main nyowani maficha eDocker 18.09
1.1 Yakawedzerwa kutenderera kutenderera
1.2 Mukana wekubatanidza Vaka-yenguva zvakavanzika
2 VakaKit kugadzirisa
Main nyowani maficha eDocker 18.09
Docker ichangobva kuburitsa vhezheni 18.09 yeEC uye EE ine zvakawanda zvinonakidza maficha uye gadziriso.
Imwe yenyaya huru dzekuburitswa uku ndedzekuti iyo Injini yeKitKit ikozvino inogona kushandiswa.
Izvi ndizvo injini nyowani yekuvaka uye kurongedza software uchishandisa midziyo. Iyo nyowani codebase inoitirwa kutsiva vekunze kwezvazvino kuvaka maficha muMoby Injini.
Zvimiro zvakanangana neiyo EE vhezheni yeiyo Docker injini inosanganisira:
Wakawedzera FIPS kutevedzera kweWindows Server 2016 uye nedzimwe shanduro
Docker Yemukati Kuvimba Kuteedzera kweiyo Enterprise Injini. Izvi zvinobvumira Docker Injini - Enterprise kumhanyisa midziyo isina kusainwa nerimwe sangano.
Uyewo Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mutsva wekuraira "#syntax" yakaunzwa, iyo inobvumidza kuiswa kweDockerfile kuparadzanisa ekuwedzera.
Iko kugona kwekushandisa kuvakaKit pasina kusanganisira yekuyedza modhi kwakawedzerwa uye iyo API yakagadziridzwa kune vhezheni 1.39 yatambirwa.
Kune rumwe rutivi, akawedzera rutsigiro rwekuwana kure kushandisa SSH uye mutsva murairo "docker injini" kudzora iyo lifecycle yeiyo Docker Injini, iyo inomhanya mune yakasarudzika irombo mudziyo unobva pane containerererd.
Yakawedzerwa kutenderera kutenderera
Sezvo zvaDocker 18.09, kuburitsa rutsigiro nguva yakawedzerwa kubva pamwedzi mina kusvika kumwedzi minomwe nekuda kwekuvandudza kweiyo Docker Nharaunda Yekuvandudza kutenderera (Kuburitswa kwakadzikama ikozvino kwaumbwa kwete kamwe chete pamakota, asi kamwe chete pamwedzi mitanhatu.)
Mukana wekubatanidza Vaka-yenguva zvakavanzika
Imwe yematambudziko ekushandisa Dockerfiles yagara ichiwana zviwanikwa zvakavanzika. Sekuziva kwangu kana iwe uchifanira kuwana repository kana pachivande sevhisi, pakanga pasina chaicho chakanaka kuzviita.
Docker 18.09 yekuvaka rairo inouya nemazhinji matsva matsva. Chinonyanya kukosha, kuita nyowani nyowani yekumisikidza inoitwa neiyo Moby BuildKit chirongwa chingave chashandiswa.
Iyo BuildKit backend inouya neboka rezvinhu zvitsva, imwe yacho iri rutsigiro rwekuvaka zvakavanzika muDockerfiles.
Iyo Kuvaka zvakavanzika kuitiswa kunoenderana nezve maviri matsva maficha akapihwa neKuvakaKit. Imwe kugona kushandisa mifananidzo-yakatakurwa tsika inogadzira yekuvaka kumberi mune rejista, uye imwe yacho kugona kushandisa mounts muRUN mirairo yeDockerfiles.
Docker 18.09 inosanganisira zvakare nyowani yekuvaka iyo inovandudza mashandiro, chengetedzo manejimendi, uye kuwedzeredza, uku uchiwedzera zvimwe zvakakosha maficha.
Kugadziridza kwekuita BuildKit inosanganisira modhi yakagadzirwazve concurrency uye caching iyo inoita kuti iwedzere kukurumidza, iwedzere kurongeka uye inotakurika.
Semuenzaniso, pakuyedza chirongwa cheDockerfile Moby seti kumhanyisa yakawedzera kubva pa2 kusvika pa9,5 nguva nekuda kwekuitwa panguva imwe chete kwematanho ekumisikidza akawanda, vachiregeredza matanho asina kushandiswa uye akawedzera mafaira mafaira pakati peseti mukutarisa mamiriro.
Uku kumisikidza kutsva kunotsigirawo aya matsva ekushandisa mamodheru:
Matanho akafanana ekuvaka
Darika matanho asina kushandiswa uye mafaira asina kushandiswa
Kuwedzera kwechimiro kutamisirwa pakati pekuvaka
Yehumwe hunhu hunogona kusimbiswa, tinowana:
Yakagadziridzwa yekuisa bash uye zsh yekuraira mabhesi.
Iyo nyowani yemunharaunda rejista mutyairi yakawedzerwa, ichibvumira iro registry kuchengetwa mune yemuno faira. Kusiyana nejsonfilelog, iyo nyowani inobata haina kusungirwa kune yakasarudzika fomati.
Wakawedzera rutsigiro rwekushandisa yakasarudzika yepasi rose kero dziva.
Kubva paDocker Injini 18.09, chigadzirwa chebhizimusi Docker Enterprise 2.1 yakaumbwa, iyo inosanganisira kuendeswa kwemamwe plugins, rutsigiro rweSLA (Service Chikamu Chibvumirano) uye zvinoreva kuratidza nemasaini edhijitari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Docker 18.09 inowedzera kutenderera kwekutsigirwa, SSH kuendesa mberi uye zvimwe